Rating: SKU: 13401-40-6. Category: Ọla abụba
Usoro Molecular: C20H18O4
Molekụla arọ: 322.358
Na usoro iwu, ike na-egbochi enzyme nke phaseolamin na-ebelata ọnụ ọgụgụ calorie dabere na nke na-emetụta ma gbanwee n'ime abụba ahụ. Enweghi ike igbari nri ndi ozo n'ime suga di mfe, sistemu nri na-achupu nri ndi ozo nke ozo n'oge mmeghari afọ. Otu nnyocha e mere na Mahadum California kwuru na phaseolamin na-egbochi ma ọ bụ na-egbu oge mgbaze nke starches dị mgbagwoju anya, si otú ahụ na-ebelata ịdị arọ na ukwu nke ndị buru oke ibu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na - egbochi abụba dịka orlistat (aha ahia Alli) na - eweta nsonaazụ nsonazụ na-adịghị mma n'ihi ọrụ ha na - egbochi enzyme, ọtụtụ ule na - egosi na enwere nsogbu afọ ọsịsa na mgbu afọ n'etiti ndị ọrụ Phaolamin.
Ebe ọ bụ na mkpụrụ akụrụ na-acha ọcha na-egbochi mmetụ nke carbohydrates na ntụgharị ha ka ọ bụrụ shuga dị mfe, ọ nwere ike ịnye ọgwụgwọ maka ọrịa shuga na hypoglycemia na-arụ ọrụ. Dr. Jay Udani – onye isi ahụike nke Medicus Research na onye edemede nke 2007 University of California ọmụmụ nke Phaseolin raw ntụ (CAS 13401-40-6) –a tụrụ aro na onyinye ahụ nwere ike belata ndepụta glycemic nke nri starchy dịka achịcha ọcha . Site na imebi ikike nke ahụ iji nweta glucose site na nri ndị a, ntụ ntụ Phaseolin nwere ike igbochi spikes na mberede na ọbara shuga na nsogbu na-akpata. Tụkwasị na nke a, mgbakwunye oge niile nwere ike igbochi ma ọ bụ gbuo oge ịmalite ụdị ọrịa shuga Typedị nke abụọ na ndị nwere hypoglycemia (pre-diabetes). Ọ bụ ezie na usoro eji eme ihe ndị a dị ka ihe na-ekwe nkwa, achọọbeghị ha site na nnukwu nnwale ụlọ ọgwụ.